Xisbiga KULMIYE Oo Heshiiskii Xukuumadda Iyo Xisbiyadda Ku Tilmaamay Mid Sharci Ahayn,Isla Markaana Aan Lagu Dhaqmahayn | Duul News International
Xisbiga KULMIYE Oo Heshiiskii Xukuumadda Iyo Xisbiyadda Ku Tilmaamay Mid Sharci Ahayn,Isla Markaana Aan Lagu Dhaqmahayn	(Duulnews)-Xisbul-xaakimka Kulmiye,ayaa markii ugu horaysay sharci-darro ku tilmaamay heshiis uu Xisbigoodu qeyb ka ahaa oo oo ay kala saxeexdeen Xisbiyadda Siyaasadda Somaliland iyo Xukuumadda uu gadh-wadeenka ka yahay Madaxweyne Siilaanyo,kaas oo sheegayay inay Doorashooyinka Madaxtooyadda iyo Wakiiladdu ay dhacaan bisha December ee sanadka 2016-ka.
Xoghayha Guud Ee Xisbigaasi MD. Xasan Siciid,ayaa sheegay in go’aankaas ay wada-gaadheen Xukuumadda iyo Xisbiyaddu aanu ahayn Heshiis Sharci ah,isla markaana uu go’aanka Golaha guurtiddu yahay ka lagu dhaqmayo ee Dastuuriga ah “Heshiiska xisbiyadda iyo xukuumaddu wada gaadheen muu ahayn heshiis dastuuri ah, balse wuxuu ahaa heshiiskaasi is-faham siyaasadeed oo ay axsaabtu wad agaadheen. Mana burinayo go’aanka golaha guurtida ee mudada ay ugu kordhiyeen xukuumadda iyo golaha wakiilada go’aankaa aanu wadda gaadhnay xisbiyaddana waxa uu ahaa mid siyaasi ah. Arrintaana markii la doonayay in golaha guurtida in lagu qanciyo xisbiga Waddani isagaa ka baxay heshiiska. markaa heshiiskaasi muu ahayn mid dastuuri ah, guurtiduna waa mid sharciya”ayuu yidhi Xasan Siciid, xoghayaha Kulmiye oo wargeyska Dawladda ee Dawan u waramay.
Xoghaye Xasan Siciid wuxuu intaasi ku daray inaanay aanay beesha caalamku burin karrin go’aanka guurtidu ka gaadhay muddo kordhinta “Annagu (Somaliland) dastuur ayaan leenahay sharci ayaan leenahay. Xidhiidh iyo wada shaqayn way inaga dhaxaysaa beesha caalamka laakiin, ma farogalin karaan mana burin karaan wixii go’aamo ah ee aynu leenahay dawlad ahaan.”
Xoghayaha Guud ee Kulmiye waxa uu tilmaamay in Kulmiye ayidsan yahay go’aanka guurtida ee ah in doorashadu dhacdo March 2017-ka “Xisbi ahaana waanu ixtiraamayaan go’aankii golaha guurtida. go’aanka golaha guurtidana waa mid sharciya oo aan ixtiraamayno oo aan aqoonsanahay wax dhici doonaana ma jiraan deerona deero hirdiyi mayso waxaa mucaaradku sheegayaan sharcigana cidina kama wayna.”
Hadalkan ka soo yeedhay xoghayaha Kulmiye ayaa u muuqda mid ka marag kacaya aragtida mucaaradka ee ah in xukumadda iyo xisbigeedu ka baxeen heshiiskii ay la gaadheen ee ahaa in laga noqdo wakhtiga guurtida doorashana la qabto December 2016
Daawo: Wasiir Samaale,Madaxweyne Siilaanyo Iyo Saylici,Waa Shan Sanno ka Hor.Balan-qaadkii shalay iyo Muuqaalka Maanta